သီးဆီးယပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘူဂေရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုဖီယာမြို့တော်မှ Vassil Bojkov ၏ စုဆောင်းထားမှု၊ သီးဆီးယပ်စ်နှင့် မာရသွန်နွားသိုးပါဝင်သော ရှေးခေတ် ငွေဝိုင်ခွက်
သီးဆီးယပ်စ် (ဂရိ: Θησεύς; အင်္ဂလိပ်: Theseus) သည် အေသင်မြို့ ကို တည်ထောင်သူ ဒဏ္ဍာရီလာ သူရဲကောင်းနှင့် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ပါးဆီးယပ်စ်၊ ကဒ်မက်စ်၊ ဟဲရာခလီးဇ် တို့ကဲ့သို့ ရှေးဟောင်းခေတ် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့တစ်ခုဟု ဖော်ပြထားသော ရန်သူများကို တိုက်ပွဲဝင် ကျော်လွှားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်၏။ ဟာကျူလီသည် အိုလံပီယာ လွင်ပြင် (Olympia) ကိုဖြစ်စေ (ပြုလုပ်) သကဲ့သို့ သီးဆီးယပ်စ်၏ သမိုင်း၌ ပါဝင်သောကဏ္ဍကို "အဓိက ယဉ်ကျေးမှု အကူးအပြောင်းကာလ" ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။:204
ဟဲရာကလီးဇ်သည် ဒေါရီယန်သားများအတွက် တည်ထောင်သူ သူရဲကောင်းဖြစ်သည့်အတိုင်း သီးဆီးယပ်စ်သည်လည်း အေသင်သားများအတွက် တည်ထောင်သူ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ အေသင်သားတို့က သီးဆီးယပ်စ်ကို 'ကြီးကျယ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူ' အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပြီး ၎င်း၏ အမည်နာမသည် θεσμός (thesmos) မှဆင်းသက်လာကာ အနက်မှာ "စည်းကမ်း (သို့) စည်းမျဉ်း" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရရှိသည်။ သီးဆီးယပ်စ်ပါဝင်သော ခရီးစဉ်များ၊ စွန့်စားခန်းများနှင့် ၎င်း၏မိတ်ဆွေများ စသည်တို့သည် ခေတ်အဆက်ဆက် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပင် ဖြစ်သည်။
သီးဆီးယပ်စ်သည် အေသင်အဖြစ် အာတီကဒေသ (Attica) ကို နိုင်ငံရေးအရ စုစည်းညီညွတ်စေခဲ့သည်။ ဘီလူးများ၊ မိစ္ဆာသတ္တဝါမျကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ခက်ခဲသော ခရီးစဉ်တွင် အေသင်(မြို့ပြနိုင်ငံ) တည်ခြင်းကို အရည်အသွေးတစ်ရပ်၏ အမှတ်သညာအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။ နိုင်ငံကို စုရုံးတည်ထောင်သူဖြစ်သောကြောင့် မိုက်ဆီးနီး တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိသည့် နန်းတော်နှင့် ဆင်တူနိုင်သော "အခရောပါလစ်" (Acropolis) ရဲတိုက်ခံတပ်ကြီးတွင် နန်းတော်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဂရိ ခရီးသွားနှင့် ပထဝီဝင်ပညာရှင် ပေါဆေးနိယပ်စ်က သီးဆီးယပ်စ်သည် မြို့ပြနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးနောက် "လူသားအားလုံးအတွက် အဲဖရာဒိုက်တီ" နှင့် "ပီသော့ - Peitho" (နတ်ဘုရားမ) ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို အခရောပါလစ်၏ တောင်ဘက်ကုန်းစောင်း(ဒေသ)တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည် ဟု ဖော်ပြသည်။
ဂရိတွေးခေါ်ရှင် ပလူးတာ့ခ်၏ "သီးဆီးယပ်စ် ဘဝ" သည် မစ်နာတော သေဆုံးခြင်း၊ သီးဆီးယပ်စ် လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ခရီးတီးမင်းသမီ အာရီးယတ်ဒနီ၏ သီးဆီးယပ်စ်အပေါ် ချစ်ခြင်း စသောအမျိုးမျိုးသော ဖော်ပြချက်များကို ရေးသားထားသည်။[lower-roman ၁]
ပလူးတာ့ခ်၏ ရင်းမြစ်စာပေများတွင် ဖီရီးဆိုက်ဒီးဇ် (ဘီစီ ငါးရာစု အလယ်ခန့်) ၊ ဖစ်လောကာရပ်စ် (ဘီစီ လေးရာစုခန့်)၊ ကလိုင်ဒီးမပ်စ် (ဘီစီ လေးရာစုခန့်) စသော သမိုင်းဆရာ၊ စာရေးဆရာများ၏ စာပေများပါဝင်သည်။ (ထိုစာပေရင်းမြစ်များအားလုံးသည် တစ်သီးတစ်သန့် ရှင်သန် ကြွင်းကျန်ခြင်းမရှိကြ) ဒဏ္ဍာရီ၏ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်အနေဖြင့် စစ်မှန်သော လူသားတစ်ဦးအဖြစ် သီးဆီးယပ်စ်၏ တည်ရှိနေထိုင်ခဲ့မှုကို သက်သေမထူနိုင်သော်လည်း ပညာရှင်များက ယုံကြည်သည်မှာ ၎င်းသည် ကြေးခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိနေထိုင်နိုင်ခဲ့သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် တည်ရှိပုံမှာ ဘီစီ ၈-၉ ရာစုမှ ဘုရင်တစ်ပါးအနေအထားဖြင့် ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
↑ "May I therefore succeed in purifying Fable, making her submit to reason and take on the semblance of History. But where she obstinately disdains to make herself credible, and refuses to admit any element of probability, I shall pray for kindly readers, and such as receive with indulgence the tales of antiquity." (Plutarch, Life of Theseus, translated by Bernadotte Perrin). Plutarch's avowed purpose is to constructalife that parallels the Life of Romulus that embodies the founding myth of Rome.
↑ Ruck, Carl A.P., and Danny Staples (1994). "Theseus: Making the New Athens." Pp. 203–222 in The World of Classical Myth. Durham, NC: Carolina Academic Press.
↑ Cueva, Edmund P. (1996). "Plutarch's Ariadne in Chariton's Chaereas and Callirhoe." American Journal of Philology, 117(3):473–84.
↑ Greene၊ Andrew။ Theseus, Hero of Athens။
↑ Classical Mythology Tenth Edition။ Oxford University Press။ 31 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သီးဆီးယပ်စ်&oldid=622548" မှ ရယူရန်